Gossip - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > 2017-03 mpandimby ny Magazine > Mifosa
Ao amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra amerikana "Hee Haw" (1969 ka hatramin'ny 1992 miaraka amin'ny mozikan'ny firenena sy ny sketches) dia nisy ampahany vazivazy niaraka tamin'ny "Four Klapschweibern", izay nihira hira kely izay nisy soratra toy izao: "Henoy, henoy .. Tsy izahay no mihazakazaka sy manely tsaho satria, satria ... tsy izahay no mitaingina fifosana, ary tsy ... tsy hamerina ny tenanay intsony, hee-haw ary ho vonona fa indray mandeha ianao mahafantatra ny vaovao farany ». Toa mahafinaritra ve? Misy karazany ny fifosana. Raha ny marina, misy ny fosafosa tsara, ny fifosana ratsy, ary na ny fifosana ratsy aza.
Misy zavatra hafa vazivazy tsara ve? Raha ny marina dia misy dikany maro ny fosafosa. Ny iray tamin'izy ireo dia mifandraika amin'ny varotra vaovao hafakely. Izany rehetra izany dia mifampihoatra tsy misy farany. "Nanala ny volony i Maria". "Hans nividy fiara vaovao". "Niteraka zazalahy" i Julia. Tsy hisy ho tafintohina raha tsy miparitaka ny fampahalalana ankapobeny momba azy. Ity karazana fialamboly ity dia manampy antsika hanorina fifandraisana ary afaka mampitombo ny fifankahazoana sy fifampatokisana.
Ny dikan'ny felany hafa dia manondro ny fiparitahan'ny tsaho, izay masiaka loatra na manokana amin'ny natiora. Maika er eager ve isika miafina amin'ny tsiambaratelo mahamenatra ataon'ny olona? Tsy maninona na marina na tsia. Ny zavatra toy izany dia tsy voatery hanomboka amin'ny fahamarinana antsasaky, fa tsikelikely kosa no ampandehanan'izy ireo namana akaiky amin'ny namana akaiky hafa, izay mamadika azy ireo amin'ny sakaizany akaiky, ka amin'ny farany dia somary vazaha ihany ny vokatra, fa ny rehetra no nino. Raha ny voalaza dia: "Tianao ny hino izay tsofina ao ambadiky ny tananao". Ity karazana fosafosa ity dia mety handratra ny handratra. Ny fifosana ratsy dia mety ho fantatra amin'ny alàlan'ny fijanonana ilay resaka avy hatrany rehefa miditra amin'ilay efitrano ilay olona. Raha tsy sahy milaza amin'ny olona mivantana ianao dia tsy mendrika ny hamerimberina izany.
Ny mifosafosa maloto na manaratsy dia natao hanimba ny lazan'ny olona iray. Mihoatra lavitra noho ny fandehanana ny zavatra henoina. Momba ny lainga izay voalaza fa miteraka fanaintainana sy alahelo lalina. Mivezivezy mora foana amin'ny Internet izy ireo. Mampalahelo fa ny olona dia mino ny zavatra vita pirinty fa tsy izay zavatra bitsibitsoka an-tsofina akory.
Ity karazana fifosana ity dia toa tsy misy dikany mihitsy mandra-pahatongan'ny olona iray ho lasibatry ny faharatsiana toy izany. Ireo mpianatra ratsy fanahy dia mampiasa io fomba fanao io amin'ny mpianatra hafa tsy tiany. Mandrisika tanora maro hamono tena ny cyberbullying. Any Amerika aza dia antsoina hoe “bullycide” [famonoan-tena noho ny fampijaliana]. Tsy mahagaga àry raha milaza toy izao ny Baiboly: “Ny ratsy fanahy mahatonga ady, ary ny mpanendrikendrika mampisara-bazana ny namana.” ( Ohabolana 16,28). Hoy koa izy: “Ny tenin’ny mpanendrikendrika dia toy ny hanim-py ka mitsoriaka.” ( Ohabolana 1.8,8).
Tokony ho fantatsika momba izany: ny fifosana dia toy ny volom-borona kely entin'ny rivotra avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray. Raiso ny volom-borona folo ary atsofohy amin'ny rivotra. Avy eo, miezaka ny hisambotra ny volom-borona indray. Mety tsy ho sarotra izany. Toy izany koa amin'ny fifosafosa. Vantany vao mametraka tantara mifosafosa ianao eo amin'izao tontolo izao, dia tsy azonao atao ilay izy satria miakatra amin'ny toerana iray izany.
Soso-kevitra momba ny fomba hitondrana azy io amin'ny fomba mety
Raha toa ka misy olana eo aminao sy olon-kafa, andramo izany eo afovoanao. Aza milaza na iza na iza momba izany.
Aoka ianao hanana tanjona raha misy olona manaisotra ny tsy fahafaham-ponao aminao. Aza adino fa ho henonao ihany ny fahitana an'io olona iray io.
Raha misy olona manomboka milaza vaovao aminao, dia tokony hanova ny lohahevitra ianao. Raha misy fanelingelenana tsotra tsy manao na inona na inona, dia milazà hoe: «Lasa manaratsy ahy loatra ny resaka ataonay. Tsy afaka miresaka zavatra hafa ve isika? » Na lazao hoe: "Tsy mahazo aina aho miresaka azy ireo ao ambadiky ny olon-kafa."
Aza miteny na inona na inona momba ny olon-kafa izay tsy hiteny eo anatrehany
Rehefa miresaka momba ny hafa ianao dia manontania tena amin'ireto fanontaniana manaraka ireto:
Marina ve izany (fa tsy voaravaka, miolakolaka, novolavolaina)?
Manampy (mahasoa, mampahery, mampionona, manasitrana) ve izany?
Manentana (mampientanentana, mendrika halain-tahaka) ve izany?
Ilaina ve izany (ho torohevitra na fampitandremana)?
Sariaka ve izany (fa tsy mitabataba, maneso, tsy voafehy)?
Aorian'ny andrenesanao izany amin'ny olon-kafa ary ampitao aminao izany, dia andao holazaintsika ny filazàna fa tsikombakomba tsara ka afaka milaza amin'ny olona manandrana fosafosa ratsy aminao ianao - ary noho izany manakana ny tsaho ho lasa ratsy ,